Wasiirka arimaha gudaha oo ku fashilmay wax ka qabashada shaqaaqda soo noqnoqonaysa ee deegaanka Ceel afweyn • Oodweynenews.com Oodweyne News
Shaqaaqda deegaanka Ceel afweyn ayaa ah mid salka ku haysa murano la xidhiidho arimo deegaan taas oo ay beelaha walal ah ee wada dega deegaanka Ceel afweyn tiroba muddo lix jeer ay dhex maray shaqaaqdo sababtay dhawaac,dhimasho iyo barakac bulsheed. ilaa hadana ma jiro wax xal waara ah oo ay xukumadihii kala horeyey ee kulmiye ka gaadheen marka laga tago socdaal gaaban oo ay ku yimaadaan degmada Ceel-Afweyn kooxo calooshooda u shaqaystayaal ah.
Wasiirka arimaha guduhuna wuxuunbuu qaaday talaabadii kuwii hore ugu fashilmeen. Wasiirka wasarada arimaha gudaha Maxamed Kaahin isagoo aan wax baadhitaan ah iyo xaqiiqo raadis ah midna samaynin isna waydiin halka ay salka ku hayo shaqaaqadan soo noqnoqonaysaa ayuu wasiirku soo saaray qodobo ma dhalays ah oo aan wax weyn ka duwanaynin kuwii aay hore uso saari jireen wasiiradii ka horyey ayuu dib ugu laabtay Hargaysa, taasina waa guul darooyinka haysta bulshada somaliland oo aad moodo in xukumadi ay doorteen ku faraxsan tahay dhiig daadanaya ee shacabka masaakiinta ah ee horeba aay u aafaysay xukuumad xumo abaaro ,biyo la’aan iyo caafimaad la’aan oo ay maalin walba ay hooyooyin badani u dhintaan xaalad caafimaad daro oo aay sababtay masuuliyad daro dawladeed waa guul daro ay shacab Somaliland ka joogaan xukumadihii Kulmiye ka dhashay ee aay gacantooda ku doorteen ha ugu darnaato xukuumada manta talada haysa ee Somaliland.Waxaase nasiib daro ah marka xalka umadeed laga dhexdoono shaqsiyada ku caan baxay dhiig sokeeye taariikhdu iyada iskeeda isku qorta Maxamed kaahin waa la wada garanayaa wixii u ka geysta Somaliland , tani waxa maanta marag ma doon u tahay inaanu horeyso iyo danbaysoba daacad iyo lilaahi ka ahayn xalinta shaqaaqda Ceel afweyn waayo hadii u daacad ka yahay xalinta iyo turxan bixinta beelaha walal ah ee wiil iyo abtigiis ah ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Ceel-Afweyn intuu qodobo aan daawo iyo xal u ahayn wiilkii la diley aabihii ama walalkii intuu ka taw-tawsiiyo Hargeisa kuma laabteen oo ma dhaheen xal waara ayaanu ka gaadhney shaqaqadii. Maxaan kala yaabi hore ayaay sosmali ugu maahmaahday “Bahal caydhin ma daayo nin caadadii ma baajiyi” taasina waxa daliil u tahay fashilka iyo aqoonyarada masuul aan la mahadin oo xilkii ummada loogu dhiibey ka dhigtay meel u bulshada walalaha ku kala dilo.
4. In cidii soo celcelisa shaqaaqadaa si cadaalad ah oo runta ku dhisan xukuumadu uga qaado talaabo lama ilaabaan ah oo u quus gooysa in si dhib yar lagu jaro naf baniiaaadam. Waxaana aaminsanahay haddii si cadaalad ku dhisan looga shaqeeyo turxaan saarida beelaha walal ah in aay aad u dhib yartahay xal u helideedu,laakiinse arintu waa mid u eeg “Qowda maqashii waxbana ha u qaban” Reer ceel-Afweyna waxaan leeyahay “Nin la sugaayo adna yaad sugi”